Bandhigga soo nooleeynta dhaqanka oo maanta lagu qabtay Muqdisho Iyo Tartan Dhex Maray Degmooyin “Sawirro” – Radio Muqdisho
Bandhiga soo nooleynta Farshaxanka,Ciyaaraha iyo Dhaqanka oo maalmahan ka socday Magaalada Muqdisho ayaa Ciyaar ka tirsan oo kubadda Koleyga ah islamarkaana u dhaxeysay Degmooyinka H/wadaag iyo Yaaqshiid lagu qabtay Garoonka kubadda koleyga ah Wiish ee Degmada C/casiis.
Waxaana Ciyaar kubadda koleyga ah wada ciyaaray Degmooyinka H/wadaag iyo Yaaqshiid, waana ciyaartii Labaad oo ay isku arkaan Degmooyinka H/wadaag iyo Yaaqshiid, waxaana 36-dhibcood guushu ay ku raacday Degmada H/wadaag halka degmada Yaaqshiid ay la timid 11-dhibcood iyadoo horay u soo wada Ciyaareen Degmada Shibis oo ka adkaatay Degmadda Hodon.
Bandhigani ayaa waxaa daawashadiisa ka soo qeyb galay Guddoomiye ku xigeenadda GOS,Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee K.Koleyga iyo Dadweyne u soo daawasho tagay Ciyaarta.
Ciyaarta kama dambeysta ah ayaa waxaa isugu soo haray Degmooyinka Shibis iyo H/wadaag oo wada ciyaari doona 24.05.2015.
Bandhigani oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya ayaa looga gonleeyahay isdhexgalka Dhalinyarada oo ay u noqo fursad ay ku bedeli karaan waxyaabaha aan Faa’iidada u laheyn, waxaana Degmadii ku guuleysata tartanka ay hanan doontaa koob loogu talo galay soo nooleynta bandhiga farshaxanka,dhaqanka,iyo ciyaaraha.